“काठमाडौं उपत्यकामा, जे नहुनु थियो, त्यहि भैदियो, केहि दिनमा आउँन, सक्छ यस्तो समस्या” – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“काठमाडौं उपत्यकामा, जे नहुनु थियो, त्यहि भैदियो, केहि दिनमा आउँन, सक्छ यस्तो समस्या”
“पछिल्लाे २४ घण्टामा काठमाडाैं उपत्यकामा ३९१ संक्रमित फेला परेका छन्। उपत्यकाका विभिन्न प्रयाेगशालामा भएका पीसीआर तथा विभिन्न स्थानमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणबाट ३९१ संक्रमित पहिचान भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । थपिएका संक्रमितमध्ये काठमाडाैंका सबैभन्दा बढी २६३ जना रहेका छन्। यसैगरी भक्तपुरमा ३१ र ललितपुरमा ९७ जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
“पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर एक हजार ८३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको ९ हजार २१८ जनाको पिसिआर र एन्टीजेन परीक्षणमा एक हजार ८३३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।”
“स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ५ हजार ५३५ जना पिअिसार परीक्षण गर्दा १ हजार २३७ र ३ हजार ६८३ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ५९४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा संक्रमित पत्ता लाग्नेदर २२ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात नेपालमा ५ जनाको परीक्षण गर्दा एक जना संक्रमित पुष्टि भइरहेका छन्। नेपालमा हालसम्म ६ लाख ५५ हजार ४४९ जना संक्रमित पुष्टि भएका छन् भने तीमध्ये ६ लाख १९ हजार ८९४ जना संक्रमित निको भइसकेका छन्।”
“काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले २०७८ को बैशाख १६ गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा असारको दोश्रो साताबाट स्माट्र निषेधाज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ। तर यो संगै संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै जान थालेको छ । पछिल्लो दुई सातामा काठमाडौंसहित १४ जिल्लामा संक्रमण बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले बागमती प्रदेशको काठमाडौं र चितवन लगायत १४ जिल्लामा संक्रमण बढेको बताए ।”
“प्रदेश १ को इलाम, खोटाङ, झापा र धनकुटा, गण्डकी प्रदेशमा कास्की र स्याङ्जा, लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान, कर्णाली प्रदेशको डोल्पा र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर, बझाङ र बाजुरामा संक्रमण बढेको छ ।
“यो अवस्थामा अब काठमाडौमा जारी रहेको निषेधाज्ञा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले यस विषयमा अहिले कुनै छलफल सुरु नभएको जनाएका छन् । तर संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका कारण फेरी पनि निषेधाज्ञा थप्न सकिने संभावना भने ब्यक्त गरेका छन् ।
“ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला कोरोनाको संक्रमणदर बढेपछि निषेधाज्ञामा जान सकिने तर्फ संकेत गरेका हुन् । प्रजिअ निरौलाले भने, ‘संक्रमण दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा हुन सक्छ। हालसम्म प्रशासनले यस विषयमा छलफल गरेको छैन। हामी असारको ३०र३१ गते बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं।’
Previous “आउने साउन दुई,गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ ?
Next “पोखराका मेयर,लाई मस्तिष्कघा,त”
कपालको चाया कसरी हटाउने ? यस्ता छन् घरेलु उपाय
4 days ago Mechi Mahakali
गर्मीको याममा नरिवलको पानी खानुका यस्ता छन् अचम्मका फाइदा !
बजारमा चिनीको अ’भाव भएको हल्ला फैलिए पछि बोल्यो सरकार
4 weeks ago Mechi Mahakali